Ciidamada ka amar qaata Siilaanyo oo qabsaday Taleex – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
12th June 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com-Ciidamada Somaliland ayaa maanta barqadii mar kale gudaha u galay degmada Taleex ee Gobolka Sool, halkaasoo uu shir uga socday waxgarad, siyaasiyiin iyo Maamulka Khaatumo
Sida ay sheegayaan wararka Ciidamada Somaliland ayaa si nabad ah ku galay deegaankaas oo xarun u aheyd Maamulka Khaatumo, iyadoo siyaaisyiintii iyomasuuliyiinta maamulkaas ay isaga baxeen.
Taliyaha Guud ee Ciidamada Milateriga Somaliland Jen, Ismaaciil Shaqale ayaa sheegay in ciidankooda si caadi ah oo nabadgelyo ku jirto u galeen deegaanka, waxaana uu ku sababeeyay gelitaankooda Taleex howl gal caadi ah oo sugida xuduudaha Somaliland ah.
Taliyaha ayaa sheegay in shir aanay ogeyn Xukuumada Somaliland aan lagu qaban karin deegaanka, taasna ay amar ku qabaan inay joojiyaan.
<p>Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidankii Maamulka Khaatumo iyo Masuuliyiitooda ay xalay saqdii dhexe ka baxeen, markii ay ka war heleen dhaq dhaqaaqa ciidamada Somaliland.
Ciidamada Somaliland ayaa ku sugan wadada aada dhinaca Garoowe ee ka baxda Taleex, sidoo kale waxay ciidamada oo gaadiid dagaal oo fara badan wata ku sugan yihiin dhanka wadada waqooyi ee aada Laascaanood.
15-kii bishii April ayay aheyd markii Ciidamada Somaliland ay gudaha u galeen degmada Taleex, balse mar dambe ay iskood isaga soo baxeen.</p>
Deegaanada Sool iyo Sanaag ayaa waxaa ka taagan muran la xiriira lahaanshaha deegaanka, iyadoo labada Maamul Somaliland iyo Puntland isku heystaan deegaanadaas, halkaasoo muddo sanado ay xiisado ka taagnaayeen
Ciraaq: Magaalo kale oo muhiim ah oo gashay gacanta Islaamiyiinta